मैलो मनको उपचार – देशदृष्टि
मैलो मनको उपचार
Posted bymilanbagale September 5, 2020 September 5, 2020 Posted inUncategorized
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७६ साल भदौ १६ गते स्वयंसेवक भइ कामकाज गर्न ईच्छुक चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स लगायतलाई आवेदन दिन आव्हान गरेको छ । स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मी चाहियो भनेर सूचना निकालिरहेकै बेला जनताको सेवा गर्न कयौं दिन हिडेर आफ्नै खर्चमा देशको दूरदराजमा पुगेका ‘डाक्टरका पनि डाक्टर’ लाई खेद्ने, निषेध गर्ने, अपमान गर्ने काम भैरहेको छ । विकट गाउँहरुमा स्वयंसेवी बनेर उपचार गर्न पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई बारम्बार अपमानित गरिएको नमिठो खबरले पत्रपत्रिका र डिजिटल पत्रिकाहरु भरिएका छन् । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आदेश र दबावमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै उनलाई निषेध गरेको खबर आईरहेको छ । अवरोध गरिंदा उनको चित्तमा चोट त लागेको छ नै, दूरदराजका नागरिकहरु विशेषज्ञ सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।
जाजरकोटको ढिमे–२ मा उपचार गर्दै डा.गोविन्द केसी (तस्वीर साभार—हिमालखबर डटकम)
नागरिकको उपचार गर्न नदिईएको, होटलमा घेराबन्दीमा पारिएकोे, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागी आवश्यक औषधी समेत किन्न नदिइएको खबरले देशमा अराजकताको विकेन्द्रीकरण भएको महसुस हुन्छ । डाक्टर केसीले कयौं ठाउँमा नागरिक र जनप्रतिनिधिको न्यानो माया पनि पाएका छन् । धेरैको सफल उपचार गरेका छन् । नयाँ जीवन दिएका छन् । तर पूर्वाग्रहको बिकेन्द्रीकरणसंगै उनलाई रोकेर बहादुरी देखाउने र माथी रिपोर्ट बुझाएर स्याबासी बटुल्ने अराजक खेल शुरु भएको महसुस हुन्छ ।
अनकन्टार भूगोलसंग जुध्दै कयौं दिन हिडेर घरघरमा उपचार गर्न पुगेका देशकै एक प्रबुद्ध डाक्टरलाई उपचारमा रोकिएको खबर यो समयको सबैभन्दा कुरुप चित्र हो । यो चित्र कोरोनाजत्तिकै कुरुप र घातक छ । कोरोनाको चित्रमा काँडैकाँडा देख्न सकिन्छ । जता डाक्टर, उता अवरोधको खबर पनि त्यही कोरोनाको काँडाजस्तै महसुस हुन्छ । जनताले घरदैलोमा पाएको निशुल्क सेवा थुनेर कसको सेवा गर्न खोजिएको ? कसलाई खुशी बनाउन खोजिएको ? जनतालाई उपचारबाटै बञ्चित गर्ने राजनीति नेपालमा मात्र चलिरहेको होला कि अन्त पनि यस्तो उदाहरण भेटिएला ? असहिष्णुताको यो उचाई घातक छ ।
गोविन्द केसीको छवि सबैसामु सार्वजनिक छ । उनको सीप, निष्ठा, लगन, ईमान्दारिता, विज्ञता, सादा जीवन र प्राज्ञिक क्षमतामाथी प्रश्न उठाउने हैसियत उनकै सदाबहार बिरोधीहरुले पनि बनाएका छैनन् । केसीले गान्धीकै झल्को मेटाउछन् । कसैले श्रद्धापूर्वक दिएको एककप चियासमेत खान्न भन्ने सक्ने स्वाभिमानी हत्पति भेटिंदैन । तर डाक्टर केसी त्यसो गर्ने हैसियत राख्छन् । निष्ठाको यो जीवन राज्यका लागी आतंकसमान भएको छ । सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउनुपर्छ भन्ने उनको अडान आमरण अनशनमार्फत प्रकट हुन्छ । स्वयंसेवी यात्रामार्फत प्रकट हुन्छ । पिढी र अगेनाको छेउमा निशुल्क चल्ने ‘निजी क्लिनिक’ मार्फत प्रकट हुन्छ । कतै आपतविपद् आउनसाथ उनी औषधीको भारी बोकेर पुग्छन् । केही बर्ष पहिला जाजरकोटमा ‘हेलिकोप्टर हैजा पर्यटन’ चलिरहदा खच्चडको ढाँडमा औषधीको भारी बोकेर उकालो उक्लिरहेका डा. केसीको चित्र नेपालीको मनमनमा श्रद्धापूर्वक बसेको छ ।
आफ्नै पैसाले औषधी किनेर देश—परदेश पुग्ने एउटा डाक्टरको चित्र देश चलाउनेहरुको लागी काँडाजस्तो किन बन्छ ? किन उपचार यात्रामा अवरोध गरिन्छ ? किन विरामीले उनलाई र उनले विरामीलाई टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? आफ्नो स्वास्थ्यचौकीमा आएका विशिष्ठ विशेषज्ञबाट केही कुरा सिक्न स्वास्थ्यकर्मी किन बञ्चित हुन्छन् ? दूरदराजको केही दिनको बसाईमा त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले हाडजोर्नी उपचारबारे उनीबाट केही कुरा सिक्न पाउछन् । सीपको त्यो उज्यालोले पछिसम्म धेरैको जीवनमा चहक थप्छ । उनलाई खेद्न खोज्नेको हातखुट्टा केही भैहाले जोडिने ग्यारेन्टी पनि उनको उपस्थितिले गर्छ । तरपनि खेद्न किन मरिहत्ते गरिरहेछन् स्थानीय जनप्रतिनिधि ? खेद्नु भन्नेहरुलाई सक्दिन भन्न किन सक्दैनन् ? औषधी उपचारका नाममा गलत राजनीति गर्नेहरुलाई यसो गर्दा कानून नलागेपनि पाप लाग्छ भन्ने लाग्दैन ?
गोविन्द केसीको दुर्गम यात्रासंगै राज्यको असफलताका कैयन चित्रहरु बाहिर आउँछन् । गोविन्द केसीको फैलिएको ब्यक्तित्वसंग उपचार नपाएका नागरिकका कथा बाहिर आउँछन् । स्वास्थ्य संस्थाको जराजीर्ण अवस्था बाहिर आउँछ । राज्य त्यो चित्र हेर्ने रहर गर्दैन । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथीतिबारे बारम्बार औला उठाएका छन् । त्यो औलोसंग सरकार तर्सिन्छ । उनले गर्ने प्रश्नको लस्करसंगै जोडिन्छ कमिसनमुखी राज्यसत्तासंग उनले भोकभोकै बसेर जुधाएका आँखा । उनी भोकै बसेर आँखी बनेका छन् । उपचार गरेर आँखी बनेका छन् ।
आम सर्वसाधारणको उपचारको पहुँचका लागी राज्यसंग प्रश्न गर्दा राज्य उनीसंग डराएको छ । डराएपनि नडराएको अभिनय गरिरहँदा त्यो कायरता अवरोध बनेर गाउँ—गाउँमा पोखिएको छ । केन्द्रको अराजकता बिकेन्द्रीत हुँदा दूरदराजका वडाधक्ष्यदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु उनलाई लखेट्ने क्रान्तिकारितामा रमाउन पुगेका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरु निरीह बनेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आव्हान
नेपाली समाज पाप र धर्मको खुबै हिसाबकिताब राख्छ । औषधोपचार एकादेशको कथा बनेको विकट भूगोलमा एउटा प्रबुद्ध डाक्टरलाई अपमानित गर्दा कस्तो धर्म कमाईन्छ कुन्नि ? जता पुग्यो त्यतै रोक्ने, होटल घेर्ने, विरामी जाँच्न नदिनेजस्ता हर्कत गरिरहँदा यो काम सञ्चार माध्यमबाट लुक्दैन भन्नेपनि डर छैन । कति बलिया बनेका ? यस्तो काम गरेपछि समाजसंग कसरी मुख देखाउने ? अस्पताल बनाउँछौं, डाक्टर ल्याउँछौं, उपचार गर्छौं भनेर भोट कसरी माग्ने ?
डा. केसी कुनै पार्टीको विरोध वा समर्थन गरिरहेका छैनन् । उनको प्रश्नसंग भुइँमान्छेको स्वास्थ्यको पहुँच जोडिएको छ । थीति बसाउनका लागी सबैसंग प्रश्न गरिरहेका छन् । कहिले भोकै बसेर । कहिले देश दर्शन गरेर । केन्द्रलाई खुशी पार्ने नाममा उपचारमा अवरोध पु¥याउनु निन्दनीय छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनभित्रको यो अवरोधको मनमनै उपचार गर्नुपर्छ । स्वयमसेवी डाक्टरलाई निर्वाध रुपमा सेवा गर्ने मौका दिए, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई उनीबाट सिक्ने मौका दिएमात्र मनभित्रको त्यो पूर्वाग्रही अवरोधले उपचार पाउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आत्ममन्थन गरी मनको मैलो पखाल्नु जरुरी छ । मैलो मन लिएर राजनीति गर्न सकिंदैन । केन्द्रले गलत आदेश दिएमा नाई भन्नसक्ने हैसियत बनाउनुपर्छ । मनको मैलो पखाल्न रहर गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको जय होस् ।
(२०७७ साल भदौ १७ गते हिमालखबर डटकममा प्रकाशित लेखलाई परिमार्जनसहित राखिएको )
सदा सम्झन्छ नेपाली…
सर्प पाल्ने कि चुल्हो बाल्ने ?